ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခြင်း - လိင်အတွက်ကြီးစိုးနှင့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့
ခြေချင်း, လုံး, အပျြောအပါး
အရာအားလုံးကိုခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ဘာမျှမပိုပြီးအံ့အားသင့်သည်အဘယ်မှာရှိကြိမ်မှာတော့သူကခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်အတှေ့အကွုံတှေ့ရရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ် overstimulation, အကာမနှင့်လိင်ကျော်လူအများစုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဒါဟာခေါ်ဆောင်သွားစုဝေးတစ်ချိန်ကနေထိုင်ခဲ့ရာမှတားမြစ်ချက်များထိတွေ့အားနည်းလှ၏။
မတ်ေတာ, တပ်မက်သောစိတ်နှင့် - ဂိမ်း
သငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုရှာခဲ့ရတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းမညီကြောင်းဖြစ်ကြောင်းသေးသောအရာတို့ကိုတွေ့များနှင့်အရာထို့ကြောင့်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏ aura ကဝိုင်းနှင့်တားမြစ်ထားကြသည်သိရသည်။ ပေမယ့်
ဆက်ဆံရေး၏ထက်ဝက်-အသက်, အရာလိင်ခံစားမှု၏ဖျောပွမှိုင်းနောက်ဆုံးမုသားမပြုစေခြင်းငှါ ပို. ပို. တိုတောင်းဖြစ်လာနေသည်။
စိတ်ကူးယဉ်လူတိုင်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ကူးယဉ်သာ, ခေါ်ဆောင်သွားစိတ်ကူးယဉ်ပိုပြီးတိကျတဲ့ဖြစ်။ အဲဒါကိုပဲစဉ်းစားမယ့်လျှင်တစ်ဦးချင်းစီပြီးသားတစ်အပျော်အပါးဖြစ်စေသောစိတ္တဇသို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်တစ်ခုခု။ သူတို့ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးပွင့်လင်းခြင်းနှင့်နားလည်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြာခဏဤအခေါ်ဆောင်သွားအလိုဆန္ဒများကိုချည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါကမိတ်ဖက်သူအသက်ရှင်နေထိုင်ချင်ပါတယ်ကြောင်းလျှို့ဝှက်ချက်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများရှိပါတယ်ကြောင့်၎င်း, မဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီမှာစုံတွဲတစ်တွဲမှအပြန်အလှန်ကာမရဲ့နောက်အဆင့်ကိုလောက်လွှဲ မှနေ. လွှတ်ဖို့ကူညီဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကိုယ်နှိုက်ကချေးငှားသည် - ကအကျဉ်းစကားပြောဆိုမှုထက်ပိုဘာမျှမလိုအပ်သည်။
ပုံမှန်အများဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်လိုဆန္ဒများရှားပါး ... ဒါပေမယ့်သူကိုပုံမှန်ဖြစ်ဖို့လိုလား? ဘယ်သူမှ! အကယ်စင်စစ်, အခြို့စိတ်ကူးယဉ်တွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့အခြားသူများထက်ပိုပြီးများပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအညီအမျှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဖြစ်ကြပြီးလည်းတန်းတူတန်ဖိုးရှိကြိုးစားခဲ့ခံရဖို့။
တီထွင်ဖို့ရဲစွမ်းသတ္တိ keyword ကိုဖြစ်ပါတယ်
အမျိုးမျိုးကျွန်ခံအပါအဝင်များစွာသောလူများ၏မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်။ ဤရွေ့ကား, သစ်တစ်ခုဖှံ့ဖွိုးတိုးတမဟုတ်ပါဘူး။ လူသားထုတစ်ခုလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ခံခြင်းနှင့်ဒါမြင်သာထင်ပေါ်ဝေးတစ်ဦးရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဆန်းခဲ့ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
တစ်စုံတစ်ဦးက captivate ရန်နည်းလမ်းများအလွန်အမင်းများပြားခြင်းနှင့်လည်းဘယ်မှာကြီးမားအပျော်အပါးဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ဖြစ်ကြသည်။
ခေါ်ဆောင်သွားကျွန်ခံရာကမ္ဘာတစ်ဦးမျက်နှာသစ်အဖြစ်, တဦးတည်းဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ဘဲတိတ်ဆိတ်ကြောင့်ကိုင်တွယ်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သင့်သည်။ ဤသည်ကများလွန်းရိုင်းမဖြစ်သင့်ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး! တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ကောင်းတန်းတူအပြည့်အဝရေနွေးငွေ့ရှေ့ဆက်ဒီကိစ္စကိုသို့သွားပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းချဉ်းကပ်ဖို့ကြိုးစားနေသင့်ပါဘူး။ နှင့်သင်အမှန်တကယ်အလားအလာသိပ်ကြမ်းတမ်းချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့် madig ဒါလှပသောအောင်တစ်ခုခုမဖြစ်သင့် - တစ်ခါတစ်ရံအလွန်အကျွံစိတ်အားထက်သန်မှုတစ်ခုအစောပိုင်းအဆင့်မှာစမ်းသပ်မှုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အစွမ်းသတ္တိကိုတည်ရှိသည်။
အိပ်ရာအတွက်ရှိရာအကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းမှာသူနှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံး။ များသောအားဖြင့်ပြည်တွင်းအိပ်ရာကိုအကောင်းဆုံးကျွန်ခံဖြစ်နိုင်ခြေကမ်းလှမ်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Bedpost, ဦးခေါင်းနှင့်ခြေမထိုကဲ့သို့သောအိပ်ရာ၏ခြေထောက်သို့မဟုတ် frame ကိုအဖြစ်အတိုင်းကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်ဤကိစ္စတွင်၌ရှိကြ၏။
ဒါဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုကြိုးနဲ့တုတ်ရည်ရွယ်သောအတူအလတ်စား၏ရွေးချယ်မှုကောင်းစွာစီစဉ်ထားရပါမည်။ အချို့ပျော့ပြောင်းပြီးပစ္စည်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးများထဲမှထသွားလော့။ (စနှင့်ပိုပြီးအလေ့အကျင့်မလိုအပ်) သားရေနှင့်အပိုက်ဆန်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်အချိန် - တစ်ဦးကလှပသောပဝါသို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော့ကြိုး။
အစအဦးမှာအရမ်းကြပ်မဟုတ်ထုံး။ အဆိုပါမိတ်ဖက်ထိုသို့တောင်းပန်နိုင်ပါတယ်ရင်တောင်။ တခါတရံသူကစနစ်တကျအသုံးပြုခဲ့သည့်အခါ, ကတကယ်တော့သူတို့ကိုယ်နှိုက်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ရပ်စဉ်အတွင်း node များပေါ်ရွှေ့ကြောင်းဖွစျနိုငျ ... သာမန်ပုမိုင်ဖွင့်မရကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ထို့ကြောင့်အချို့လှတျလပျမှုအဆက်ဆက်မကောင်းတဲ့အချည်းနှီးဖြစ်၏။
ဒါကြောင့်ပဲအစအဦးဖြစ်ပါသည်: အရာအားလုံးခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလျင်စလိုဘူး!
အချို့လူများကတခြားလူအပေါ်အာဏာကိုအားထုတ်၏စိတ်ကူးအရိုးစုကို - ဖြစ်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ နောက်တဖန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - အခြားသူများသို့သော်စိတ်ကူးတစ်စုံတစ်ဦးကလွှမ်းမိုးခံရဖို့ကပိုနှစ်သက်တော်မူ၏။
ဒီအကြောင်းပြချက်အများအပြားရှိနိုင်ပါသည်။ မကြာခဏနေ့စဉ်အသက်တာ၌လကျအောကျခံကလူကအရမ်းလွှမ်းမိုးလူတို့သည်မိမိတို့ကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးစိုးအနေအထားသို့မဟုတ်အခြားတစ်ဦးအခိုငျအမာခြေကုပ်အကြောင်းကိုရှိလိင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာပင်အိပ်ခန်းအပြင်ဘက်ဘက်မှာရှက်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကြီးစိုးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ရုံအမြဲသငျသညျမသောအရာကိုရှာဖွေနေ - ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဧရိယာထဲမှာ။
လွှမ်းမိုးနှင့်လကျအောကျခံ၏ "လှုပ်ရှားမှု၏လယ်ကွင်း" အဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ မကြာခဏဖျောပွကျွန်ခံတစ်ဦးချင်းစီမိတ်ဖက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုရလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သင်တန်းအများကြီးနောက်ထပ် "ပဲ" ကျွန်ခံခြင်းထက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါအတော်များများ မှစ. ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထဲတွင်အထူးကျက်သရေခံစားရတယ်။ ဒီနာကျင်မှုများစွာကို tools များနိုင်ပါတယ် generate မှ operate - ကတုတ်သို့မဟုတ်တုတ်ကိုတောင် Whips သို့မဟုတ်လိမ့်မည်။ တချို့ကအခြားသူများထက်ကအများကြီးပိုခက်ကြိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုပါဝါဂိမ်းတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူစုံတွဲ၏အိပ်ခန်းထဲမှာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ စကားများသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနည်းလမ်းများ၏ attenuation ပုံစံများအားဖြင့်, နက်ရှိုင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ... သင်တန်းသူတို့အမြဲတမ်းမဟုတ်နှင့်လုပ်ရပ်များ၏ယခုအချိန်တွင်သာအလိုဆန္ဒတိုးအသုံးပြုကြသည်။
တဦးတည်းတကယ်တော့ဒါဟာ overdo ဖို့မကိုယ်ရံတော်အပေါ်ဖြစ်သင့်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီလုပ်ရပ်အတွက်မိတ်ဖက်ကိုခေါ်ရပါမည်။ Make ခင်မှာ "ဘေးကင်းလုံခြုံစကားလုံး။ " အားလုံးလုပ်ရပ်များချက်ချင်းရပ်တန့်နှင့်မေးခှနျးကမပါဘဲရမည်ဖြစ်သည်ဟုချေါသညျဤဘေးကင်းလုံခြုံစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တဦးတည်းလည်းမခက်ခဲယူရရှိမယ့်ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောအပိုင်းအဖြစ်အာမခံချက်တစ်ခုအခြို့သောအဆငျ့ရှိသောစိတ်မရှိကြ။
အခင်းဖြစ်ပွားရာအချို့သည်စစ်ပြန်အခြားသူများကိုလုံးဝပျော်စရာစတင်ခဲ့သည်ထို့နောက်ဖွင့်, တဦးတည်းက "သွေးထွက်သံယိုဖြစ်လာသည့်အခါကိုရပ်တန့်" သင့်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်န့်အသတ်ကိုစမ်းသပ်ရမယ်သည့်အပေါ်အလွန်တဦးချင်းကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ မည်မျှနာကျင်မှုအတွေ့အကြုံရှိကငျြ့သုံးသငျ့ပါတယျသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအများဆုံးအသုံးချခံစားရရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမallgemeingüötigesစာရွက်ရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဖြစ်နေဆဲ: ဖြည့်ညှင်းအတွက်အရာအားလုံး။
sexting - အန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြောင်းသစ် | လိင် ...
ကလေးများပညာပေး | လိင်
မညီကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း | လိင်မိတ်ဖက်
အမျိုးသမီး orgasm | လိင်ပညာရေး
အောင်-up, လိင် | လိင်
Soulsex | လိင်ခေါ်ဆောင်သွား
အဆိုပါပူးပေါင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ | လိင်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော်ကြားအဆောက်အ & နေရာများ